By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa nge-Sep 7, 2020.
Igama lesiqhelo: IHydrocodone iBitartrate 7.5mg kwi-15mL, i-Acetaminophen 325mg kwi-15mL
Ifomu yesisindo: isiraphu yomlomo
Idosi kufuneka ihlengahlengiswe ngokobukrakra beentlungu kunye nokuphendula kwesigulana. Nangona kunjalo, kufuneka igcinwe engqondweni ukuba ukunyamezelana ne-hydrocodone kunokukhula ngokusetyenziswa okuqhubekekayo nokuba imeko yeempembelelo ezingahambelaniyo inxulumene nedosi. Idosi yesiqhelo yabantu abadala yipunipoon enye qho emva kweeyure ezi-4 ukuya kwezi-6 njengoko kufuneka iintlungu. Idosi iyonke yemihla ngemihla yabantu abadala mayingagqithi kwiipunipoli ezi-6.
Iidosi eziqhelekileyo zabantwana zinikwa yile theyibhile ingezantsi, kwaye ziya kunikwa zonke iiyure ezi-4 ukuya kwezi-6 njengoko kufuneka iintlungu. La madosi ahambelana nedosi nganye ye-0.27 mL / kg yeHycet (ukubonelela nge-0.135 mg / kg ye-hydrocodone bitartrate kunye ne-5.85 mg / kg ye-acetaminophen). Ukulinganisa kufuneka kusekelwe kubunzima xa kunokwenzeka.
Umyinge wemihla ngemihla wabantwana akufuneki udlule kwiidosi ezi-6 ngosuku.
Kubaluleke kakhulu ukuba idosi yeHycet ilawulwe ngokuchanekileyo. Itispuni yasekhaya okanye icephe ayisiyo isixhobo esaneleyo sokulinganisa, ngakumbi xa isiqingatha okanye isithathu kwisine sepasipuni siza kulinganiswa. Ngenxa yokungalingani komlinganiselo wecephe lwasekhaya kunye nokuba kunokwenzeka ukusebenzisa icephe endaweni yethispuni, enokuthi ikhokelele kwidosi engaphezulu, kuyacetyiswa ngamandla ukuba abanonopheli bafumane kwaye basebenzise isixhobo sokulinganisa. Ababoneleli ngononophelo lwempilo kufuneka bacebise i-dropper enokulinganisa kwaye ihambise idosi emiselweyo ngokuchanekileyo, kwaye iyalele abo banikezela ngononophelo ukuba basebenzise ulumkiso olukhulu ekulinganiseni idosi.
Ngaba i-xanax yi-opiate
yintoni i-onedrive kwikhompyuter yam
ukukhawulezisa sisiphumo se
indlela yokuthatha zofran
indlela yokusebenza kweepilocarpine